“WORKSHOP REGISTRATION LINK” – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on “WORKSHOP REGISTRATION LINK”
“ᴡᴏʀᴋsʜᴏᴘ ʀᴇɢɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ ʟɪɴᴋ”
အခုဆိုရင်တော့ NMDC SU နဲ့ JSA တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ “NMDC Virtual Student Forum 2.0” Journalism week မှ ဒုတိယရက် ဖြစ်တဲ့ 26.7.2020(Sunday) အတွက် Breakout sessions Workshop တွေကို NMDC မှ စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ မည်သူမဆို Register လုပ်ပြီး ပါဝင်နိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Workshop registration link ကို မဖော်ပြခင်မှာ Workshop တွေရဲ့ Topic တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
1. Creativity into social Media Content (by Ko Aung Phone Pyae)
2. What is Public Relation? (by Ma Kyu Kyu Thin)
3. Experience Sharing about Journalism (by Ma Aye Aye Aung)
4. Digital and Data (by Ko Phyo Sat Paing)
Workshop တွေကို မနက်ပိုင်း(10:00-12:00) နှင့် ညနေပိုင်း(3:00-5:00) ဆိုပြီး2ချိန်စီ ခွဲခြားထားပြီး မနက်2မျိုး၊ ညနေ2မျိုးဖြင့်4မျိုးလုံးကို ZOOM platform ကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ Registration link မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဦးစားပေး Workshop3မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ထားတဲ့ Workshop3မျိုးထဲမှ မနက်ပိုင်း တစ်မျိုး နှင့် ညနေပိုင်းတစ်မျိုးဖြင့်2မျိုးစီ တက်ရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ Workshop အမျိုးအစားတွေကို JSA မှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေဆီ email ဖြင့် ပေးပို့အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Workshop တစ်ခုကို အယောက် 30 နှုန်းနဲ့ စုစုပေါင်း အယောက် 120 သာ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမှာမို့ မြန်မြန်လေး Register လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်။